EX - ABSDF: သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၆-၅)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မော်လမြိုင် လူထုဟောပြောပွဲ (ဓါတ်ပုံ)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သထုံမြို့ လူထုမိန့်ခွန်း (ရုပ်သံ)
NLD ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သထုံမြို့ ရောက်ရှိ (ဓါတ်ပုံ)
တရုတ်သံရုံးရှေ့ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင် ၆ ဦးကို ထောင်ဒဏ်တွေ ချမှတ်
ပြည်တော်ဝင် Burundi သမ္မတ လုံခြုံရေးကို ကျေးဇူးတင်
ဘရွန်ဒီ အာဏာသိမ်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးကို ဖမ်းမိပြီ
မြန်မာ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်က ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ ကူညီမည်
Boston မာရသွန် ဗုံးခွဲသူ သေဒဏ်
ကန်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေး အရေးပေါ် အဆင့် ဆက်ထားမည်
အမေရိကန်က မြန်မာအပေါ်ပိတ်ဆို့မှု ၁နှစ်သက်တမ်းတိုး
မြန်မာကျည် တရုတ်ဘက်ကျလို့ တရုတ်ကန့်ကွက်
လက်နက်ကြီး ကျတဲ့အပေါ် တရုတ် မကျေနပ်
ပလက်ဝစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေ တစ်ပတ်အတွင်းနေရပ်ပြန်ကြဖို့ ညွှန်ကြား
မြင်းခြံခရိုင်ဗကသကျောင်းသားတွေ တရားရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒပြ
ပျောက်ဆုံး အမေရိကန်ရဟတ်ယာဉ် အပျက်အစီးများ တွေ့ရှိ
ကိုးကန့်ဒေသ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး သက်တမ်းတိုးဖို့ လွှတ်တော် ဆုံးဖြတ်
ကိုးကန့်ဒေသစစ်အုပ်ချုပ်ရေး ၃ လတိုးမြှင့်
ရိုဟင်ဂျာလှေစီးပြေး ရွှေ့ပြောင်းသူများ အရေး နဲ့ပတ်သက်ပြီး အစိုးရကတုန့်ပြန်
ရိုဟင်ဂျာ အရေးဆွေးနွေးပွဲ မြန်မာအစိုးရ တက်မည်မဟုတ်
ရာမာဒီမြို့ရဲ့ အခိုင်မာဆုံးနေရာကို IS တွေ သိမ်းပိုက်
မေလ (၁၅)ရက်နေ့ ထုတ် လူထုပုံရိပ် သတင်းဂျာနယ် အတွဲ(၃)၊ အမှတ်(၃၂)
မေလ (၁၇)ရက်နေ့ ထုတ် EURO SPORTS Journal ( Vol-5No- 58 )
မေလ (၁၄)ရက်နေ့ ထုတ် အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၄) အမှတ်(၁၉)
မေလ (၁၆)ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာ့အလင်း နေ့ စဉ် သတင်းစာ
မေလ (၁၆)ရက်နေ့ ထုတ် ကြေးမုံ နေ့ စဉ် သတင်းစာ
Posted: 16 May 2015 04:21 AM PDT
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယနေ့မွန်းလွဲ ၄ နာရီက မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့ ပြည်သူလုထုအား ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှစ်တစ်ရာပြည့် အခမ်းအနားတွင်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။ သတင်း-ဓါတ်ပုံ NLD Chairperson
Posted: 16 May 2015 04:03 AM PDT
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဗိုလ်ချုပ်ရာပြည့် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် လူထုနဲ့ တွေ့ဆုံဟောပြောပွဲလုပ်ဖို့ မွန်ပြည်နယ်ကို ဒီနေ့ စတင်ခရီးထွက်ပြီး သထုံမြို့ လူထုကို မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မနက် သထုံမြို့ကိုရောက်ရှိစဉ် ချမ်းမြေ့ဧည့်ရိပ်မွန်ရှေ့မှာ ဒေသခံလူထုနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့တာပါ။ ခရီးစဉ်အဖြစ် မော်လမြိုင်နဲ့ သံဖြူဇရပ်တို့မှာလည်း လူထုနဲ့ တွေ့ဆုံေ
Posted: 15 May 2015 10:47 PM PDT
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့နံနက် ၇ နာရီက ရန်ကုန်မြို့နေအိမ်မှာ မော်လမြိုင်မြို့သို့ ထွက်ခွာလာရာ သထုံမြို့သို့ နံနက် ၁၀ နာရီ ၄၀ မိနစ်တွင်ရောက်ရှိပြီး သထုံမြို့ပြည်သူများအား နုတ်ဆက်စကား ပြောကြား ခဲ့သည်။ သတင်း-ဓါတ်ပုံ NLD Chairperson (facebook)
Posted: 15 May 2015 09:14 PM PDT
တရုတ်သံရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ ခေါင်းဆောင် ၆ ဦးကို ရန်ကုန်တိုင်း ဒဂုံမြို့နယ်တရားရုံးက မေလ ၁၅ ရက်နေ့ က ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်စဉ် Photo: Thiha Tun/RFA လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကို ဒေသခံတွေ က ဆန္ဒပြကြစဉ် ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့ ရတဲ့ တောင်သူဒေါ်ခင်ဝင်းအမှုကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေး ဖို့ တရုတ်သံရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့အထဲ က ခေါင်းဆောင် ၆ ဦးကို ရန်ကုန်တိုင်း ဒဂုံမြို့နယ် တရား
Posted: 15 May 2015 08:27 PM PDT
Burundi သမ္မတ Pierre Nkurunziza ကို ထောက်ခံသူများ။ (မေ ၁၅၊ ၂၀၁၅) ဘူရွန်ဒီနိုင်ငံမှာ အာဏာသိမ်းပွဲကို တားဆီးခဲ့တဲ့အတွက် သမ္မတ Pierre Nkurunziza က သူ့ရဲ့လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ကို ကျေးဇူးတင် စကားဆိုပါတယ်။သမ္မတ Nkurunziza ဟာ သောကြာနေ့ကပြောတဲ့ ရေဒီယိုမိန့်ခွန်းထဲမှာ အဲဒီလို ကျေးဇူးတင် စကား ထည့်ပြောသွားတာပါ။ သူဟာ မော်တော်ယာဉ်တန်းနဲ့ Bujumbura မြ်ို့တော်ထဲ ပြန်ဝင် လာချိန်မှာ ထောင်ပေါင်း များစွာသော ထောက်ခံသူေ
Posted: 15 May 2015 08:23 PM PDT
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဂုတ်ဖွာ နီယွန်ဘရီ ဘရွန်ဒီနိုင်ငံတွင်း အာဏာသိမ်းဖို့ ကြိုးစားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဂုတ်ဖွာ နီယွန်ဘရီကို ဖမ်းမိပြီလို့ သမ္မတ ပြောခွင့်ရက မေ ၁၅ ရက်နေ့မှာ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ သူနဲ့ အာဏာသိမ်းမှု နောက်ကွယ်က တခြားလူတွေကို သူတို့လုပ်ရပ်တွေအတွက် ဖြေရှင်းဖို့ တရားစွဲသွားမယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဂုတ်ဖွာ နီယွန်ဘရီက ပြီးခဲ့တဲ့ မေ ၁၃ ရက်နေ့ ကြားဖြတ်အစိုးရ ဖွဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ချိန်ကြ
Posted: 15 May 2015 08:19 PM PDT
အစိုးရ ပါဝင်ပတ်သက်တာ မရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်းတွေအတွက် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (အေဒီဘီ) က ၂၀၁၆ မကုန်မီ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံအထိ ပံ့ပိုးကူညီဖို့ မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ မြန်မာနဲ့ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တို့ဟာ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍဆိုင်ရာ မူဘောင်သဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ကို မေ ၁၅ ရက်မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီး ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြလိုက်တာပါ။ အဲဒီသဘောတူညီချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံက ပု
Posted: 15 May 2015 08:16 PM PDT
သေဒဏ်ကျခံရတဲ့ ဘော်စတွန်မာရသွန်ဗုံးခွဲသူ Dzhokhar Tsarnaev. ၂၀၁၃ ခုနှစ်က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဘော်စတွန်မြို့ မာရသွန်အပြေးပြိုင်ပွဲကို ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်တာမှာ ပါဝင်ခဲ့သူ Dzhokhar Tsarnaev ကို ဂျူရီအဖွဲ့တဖွဲ့ က သေဒဏ်ချလိုက်ပါပြီ။ အဲဒီဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူသုံးဦးသေဆုံးပြီး ၂၆၄ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ပါ တယ်။ အမျိုးသားခုနစ်ဦးနဲ့ အမျိုးသမီးငါးဦးပါ ဂျူရီအဖွဲ့ဟာ သုံးရက်အတွင်း ၁၄ နာရီကျော်ကြာ အသေအချာ စ
Posted: 15 May 2015 08:08 PM PDT
အမေရိကန်သမ္မတနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ လူငယ်များ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် စိန်ရတု ခန်းမ တွင် တွေ့ဆုံ။ အမေရိကန်နဲ့ မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးကို အရေးပေါ်အဆင့်မှာ ဆက်လက် ထားသွားဖို့ အမေရိကန်သမ္မတ အိမ်ဖြူတော်က သောကြာနေ့ မှာ ကြေညာ ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ တိုးတက်မှုတွေ ရှိထားပြီးတော့ ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကို ဆက်ပြီး အားပေးထောက်ခံ သွားမယ်လို့ ဆိုပေမဲ့ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်
Posted: 15 May 2015 08:05 PM PDT
ရခိုင် ပြည်နယ် အပါအဝင် လူမျိုးစု ဒေသ တွေ မှာ ရှိနေဆဲ ဖြစ်တဲ့ ပဋိပက္ခတွေ နဲ့ လူ့ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု တွေ အပေါ် စိုးရိမ် ရဆဲ ဖြစ်တယ် လို့ အမေရိကန် အစိုးရ ပြော။ မြန်မာ နိုင်ငံ ပေါ် ထားရှိ တဲ့ အမေရိကန် ရဲ့ ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့ မှု တွေ ကို အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမား က တစ်နှစ် သက်တမ်း တိုးမြှင့် လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ ဆုံးဖြတ် ချက် ကို ကွန်ကရက်စ် လွှတ်တော် ထံ ကို အကြောင်း ကြားခဲ့တာ မှာ မြန်မာ နိုင်ငံ အတွင်း သိသာ
Posted: 15 May 2015 08:02 PM PDT
မြန်မာကျည်တွေ တရုတ်ပိုင်နက်ထဲ ကျကွဲပြီး လူ ၅ ဦး ဒဏ်ရာ ရ။ မြန်မာဘက် က ပစ်ခတ် တဲ့ ကျည်တွေ တရုတ် ပိုင်နက် ထဲ ကျရောက် ပေါက်ကွဲပြီး လူ ၅ ဦး ဒဏ်ရာ ရခဲ့တဲ့ အတွက် တရုတ်အစိုးရ က မြန်မာ အာဏာပိုင် တွေ ကို ကန့်ကွက် လိုက်ပါတယ်။ တရုတ် နိုင်ငံခြားရေး ဌာန ရဲ့ ပြောခွင့်ရ ဟွားချူရင်း က ဒီ ဖြစ်ရပ် အတွက် တရုတ်အစိုးရ အနေနဲ့ အင်မတန် မကျေမနပ် ဖြစ်ရပြီး အလားတူ ဖြစ်ရပ်မျိုး တွေ ထပ်မံ ပေါ်ပေါက် မလာအောင် မြန်မာ အစိုးရ
ပှိုင့် ၂၂၀၂ တောင်ကုန်းကို လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်စဉ်။ သတင်းဓာတ်ပုံ- ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန MOI. ကိုးကန့်ဒေသ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် နယ်စပ်က တရုတ်မြို့ တမြို့အပေါ် လက်နက်ကြီး ကျည်ကျ ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး အရပ်သား ၅ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတွက် တရုပ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက မြန်မာတာဝန်ရှိ သူတွေကို အလေးအနက်ခေါ်ယူ သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ကိုရန်နိုင်ကပြောပြမှာပါ။ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း တရုတ်-ြ
ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ် ပြိုင်ဆိုကျေးရွာကနေ ကြွေတောင်ကျေးရွာကို ရောက်ရှိနေကြတဲ့ စစ်ဘေးဒုက္ခသည် ၃ဝဝ ကျော်ကို အစိုးရတပ်မတော် ခလရ-၂၈၉ တပ်ရင်းဗျူဟာမှူးက လာမယ့်မေလ ၁၈ ရက်နေ့ကနေ ၂၃ ရက်နေ့အတွင်း မိမိတို့နေရပ်ကို အပြီးပြန်ကြဖို့ အကြောင်းကြားထားပါတယ်။ ပြိုင်ဆိုကျေးရွာအနီးမှာ အခြေအနေတွေမတည်ငြိမ်သေးတာကြောင့် အခုလက်ရှိနေရာမှာပဲ ဆက်လက်နေထိုင် ခွင့်ပြုဖို့ ပလက်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို တင်ပြထားတယ်
လက်ပံတန်း ကျောင်းသား သပိတ် အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှု ကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေ နဲ့ ဝန်းရံကြသူ ၆ ဦးကို ဒီနေ့ မြင်းခြံခရိုင်တရားရုံးမှာ ရုံးထုတ်စစ်ဆေးစဉ် မြင်းခြံခရိုင် ဗကသများအဖွဲ့ချုပ် ဝင် ကျောင်းသား ၅ဝ ကျော်က တရားရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ ကူညီဝန်းရံသူတွေကို အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့အတွက် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုတာ ဖြစ်တယ်လို့ မြင်းခြံခရို
Posted: 15 May 2015 02:27 PM PDT
ခတ္တမန္ဒူ မေ ၁၅ လွန်ခဲ့သော ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်က ဒုတိယမြောက် အကြီး ဆုံး ငလျင်တစ်ခုသည် ဟိမဝန္တာအနီးရှိ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သော နီပေါနိုင်ငံတွင် လှုပ်ခတ်ခဲ့သောကြောင့်လူသေဆုံးမှု နှုန်း မြင့်တက်လျက်ရှိစဉ် ကယ်ဆယ် ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အမေရိကန် မရိန်းတပ်သား ခြောက် ဦးနှင့် နီပေါစစ်သား နှစ်ဦးတို့ပါသော တပ်မတော် ရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်းသည် နီပေါနိုင်ငံအရှေ့ဘက်သို့ အင်္ဂါနေ့ ဒေသစံတော်ချိန် မွန်းလွဲ ၂ နာရီက ပျံသန်းထွ
ကိုးကန့်ဒေသ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို ရက်ပေါင်း ၉၀ ထပ်မံ တိုးမြှင့်ပေးဖို့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ဒီကနေ့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ ဒီလို ဆုံးဖြတ်ဖို့ဆွေးနွေးရာမှာ ကိုးကန့် ပဋိပက္ခ အပေါ် လွှတ်တော် အမတ်တွေအကြား မတူတဲ့ အယူအဆ အမြင်တွေရှိကြ တာတွေ့ရပါတယ်။ လုံခြုံရေးရှုဒေါင့် က ဆွေးနွေးသူတွေ ရှိသလို၊ ပြည်သူတွေရဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ ပြည်ထောင်စု အရေး ဒေါင့်က ဆွေးနွေးသွားမှုတွေ လည်း တွေ့ရ ပါတယ်။ ဗွီအိုအေ ရန်ကုန်ရုံးကနေ မမေခ သတ
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ လောက်ကိုင်ဒေသမှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာချက် ကို နောက်ထပ်ရက်ပေါင်း ၉ဝ တိုးမြှင့်ဖို့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ကန့်ကွက်သူမရှိ ဒီနေ့ အတည်ပြုလိုက် ပါတယ်။ သမ္မတကိုယ်စား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝေလွင်က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ တင်ပြခဲ့တာပါ။ "လောက်ကိုင်မြို့ရဲ့ တောင်ဘက်ခြမ်းမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးကောင်းမွန်ြ
ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် စခန်းတခုအတွင်းမှာ သူ့သား လူကုန်ကူးတွေ နဲ့ ပါသွားပုံ ကို အဖေဖြစ်သူ က ပြောပြ အက်ဒမန်ပင်လယ်တွင်းမှာ လှေစီးပြေး ရွှေ့ပြောင်းသူများ ကမ်းမကပ်နိုင်ပဲ ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ အရေး နဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာအစိုးရပိုင်း က ပြဿနာတွေ က မြန်မာဘက်က အဓိက စတင်ခဲ့တာ ဆိုပြီး လက်ညိုး မထိုးဖို့ တုန့်ပြန် လိုက်ပါတယ်။ လှေစီးပြေး ရွှေ့ပြောင်းသူတွေ ထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ် ဘက် က ဘင်္ဂ࿿ါလီတွေ ပါကောင်းပါ
Posted: 15 May 2015 02:23 PM PDT
အရှေ့တောင် အာရှ နိုင်ငံတွေဆီ ထွက်ပြေးကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ အရေး ထိုင်းနိုင်ငံက ကျင်းပဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ ညီလာခံကို မြန်မာနိုင်ငံ တက်ရောက်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ မြန်မာ အစိုးရက တုန့်ပြန်လိုက်ပါ တယ်။ ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေရဲ့ လူကုန်ကူးမှု ပြဿနာကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြဿနာ အဖြစ် ဦးတည်ချက်ပြောင်းအောင် လုပ်ဆောင်နေတာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း မြန်မာ အစိုးရက ပြောဆိုပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်း အတွင်း မှာဘဲ ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာ လှေတွေနဲ့ မျော
Posted: 15 May 2015 02:14 PM PDT
အန်ဘာ ပြည်နယ်နဲ့ ရာမာဒီ မြို့ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ အီရတ် တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ IS စစ်သွေးကြွတွေ အကြား တိုက်ခိုက်နေခဲ့။ အီရတ် နိုင်ငံမှာ အကျယ်ဆုံး ပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တော် ရာမာဒီ မြို့က အစိုးရ ဌာနချုပ် အဆောက်အအုံကို IS အစ္စလာမ္မစ် နိုင်ငံအဖွဲ့ စစ်သွေးကြွတွေကို ထိန်းချုပ် လိုက်နိုင်ပြီလို့ သတင်းတွေ ရရှိပါတယ်။ ရာမာဒီ မြို့က ရဲဌာနချုပ်နဲ့ မြို့တော်ဝန် ရုံးခန်း တည်ရှိရာ ဝင်းခြံ အတွင်းမှာ IS စစ်သွေးကြွတွေက
Posted: 15 May 2015 01:25 PM PDT
မေလ (၁၅)ရက်နေ့ ထုတ် လူထုပုံရိပ် သတင်းဂျာနယ် အတွဲ(၃)၊ အမှတ်(၃၂) ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
Posted: 15 May 2015 01:21 PM PDT
မေလ (၁၇)ရက်နေ့ ထုတ် EURO SPORTS Journal ( Vol-5No- 58 ) ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
Posted: 15 May 2015 01:19 PM PDT
မေလ (၁၄)ရက်နေ့ ထုတ် အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၄) အမှတ်(၁၉) ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
Posted: 15 May 2015 01:17 PM PDT
မေလ (၁၆)ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာ့အလင်း နေ့ စဉ် သတင်းစာ သတင်းစာ ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
Posted: 15 May 2015 01:16 PM PDT
မေလ (၁၆)ရက်နေ့ ထုတ် ကြေးမုံ နေ့ စဉ် သတင်းစာ သတင်းစာ ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ